नजिकिँदै सीपीएल, को–को छन् सन्दीपको टिममा स्टार क्रिकेटर? - Everest Dainik - News from Nepal
नजिकिँदै सीपीएल, को–को छन् सन्दीपको टिममा स्टार क्रिकेटर?
काठमाडौंः नेपालका चर्चित लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने यो संस्करणमा क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) मा बार्बाडस ट्राइडेन्टसमा आवद्ध छन् ।
यो सिजनमा सन्दीपलाई बार्बाडसले पाँचौ राउन्डमा अनुबन्ध गरेको हो । उक्त स्थानमा छानिने खेलाडीले कम्तिमा ७० हजार अमेरिकी डलर (करिव ८० लाख नेपाली रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपको टिमविरुद्ध पारसआवद्ध आबुधाबीको खराब सुरुवात
यो संस्करणको सीपीएल ड्राफ्टमा नेपालका सन्दीपसहित युवा दिपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र रोहितकुमार पौडेल परेका थिए । सीपीएलको यो सिजन ४ सेप्टेम्बरदेखि १२ अक्टोबरसम्म हुँदैछ । सन्दीपको टिमको पहिलो खेल ८ सेप्टेम्बरमा गुयना गमेजन वारियर्सविरुद्ध छ ।
सन्दीपले अघिल्लो सिजन पनि सीपीएल खेलेका थिए । उनले २०१८ मा सेन्टकिट्स एण्ड नेभिस प्याट्रियट्सबाट ५ खेलमा सात विकेट लिएका थिए । यो पटक सन्दीपको टोलीमा को–को खेलाडी?
बार्बाडस टिमः एलेक्स हेल्स, जेसन होल्डर, आसिफ अली, वाहब रियाज, सन्दीप लामिछाने, जोसन चाल्स, साई होप, एश्ले नर्स, इमाद वासिम, जोनाथन कार्टर, केमर होल्डर, रोशन प्रिमिअस, रेमोन प्रिमियर, जुस्टिन ग्रेभिस, जोश्वा विश्वप, ह्यादिन वाल्स र लिंको बोउचर ।
ट्याग्स: क्यारेबियन प्रिमियर लिग, बार्बाडस ट्राइडेन्टस, सन्दीप लामिछाने, सीपीएल